Shaampiyooni Booksii Ameerikaa Eenyummaa Ofii fi saba ufii Lallisuudhan Beekkamu, Muhammad Alii oggaa 74tti du'e.Muhammad nama isa waliin dorgome Sonny Liston dahee lafa buusee idaawwata
Harkaa fi miililleen wal qixxee ariifataa. Harkii isaa akka qaanqee xinniqa, akka mandiisuu nama irraa dibbisaa jedhaa warri dhahichaa isa laaleffatee dubbatu.
Kaan jabaa akka sibiilaa jedhaan,innii ammo "Ani Jabaa Jabaallee Caalu Qofaa Mitii Jabaayyuu Harka 100 Caala," ufiin jedha.
Waan ufiin jedhu fakkaata malee akka namii hedddun jedhutti Muhaammad saba isaa akkana faarsa.
Muhaammad Alii,nugusa,pirezidaantii, abbootii amantii,dureessaa fi namii tapahtee waliin hin koblin gugurdaa waan hafee hin fakkaatu.
Wantii mirkanaa ammoo Muhaammad Alii,namii addunyaa irratti dorgommii boksiitiin beekamuu marroo sadii shaampiyoonaa addunyaa tahe.
Waan midhaaffatee dhahe cinaachaa lafaan gaha.Harka Muhaammad keessaa bitachaa irra sodaataa warrii arge.
Boksiin tun afaan Oromootiin maqaa akka akkaa qabdi; tantoommuu, buunyaa fi abootee.
Muhaamad Alii dorgmmii boksii qofaa mitii qabsaahaa mirga ilmee namaallee.Qaraa fiixee qabsoo ufi irraa jalqabee maqaa Cassius Marcellus Clay jedhani itti baasan "Maqaa warri nu garboofate natti baase," jedhee ufi irraa jijjiire.
Muhaammad Jimaata, Waxabajjii 3,2016 Amerikaa godina Arizoonaa, magaalaa Finikis (Phoenix)keesstti dhibuma duruu ganna 30 caalaa isa rakkisaa bahe,ingilifaan Parkinson disease jedhaniin ganna 74ti lubbuu dhabe.Dhukkubii kun dhiba surrii irraa dhufa. Harkaa fi arraballee hidhee chochohuu dhowwa.
Muhaammad Alii marroo 61 dorgommi addunyaa dorgome marroo 56 moohee tana keessaa 37 warra isa waliin dorgome dhahee lafaan dhahe. Jecha ingiliffaan Knockout baanan taan.Ufi ammoo marroo shan moohame.
Muhaammad eennu?Innii eennu ufuun jedha?Dhalaa fi hariyaan isaa hoo?
Muhaammad Ammajjii 17,bara 1942 Luyivil Kentaakiitti dhalate.Namii boksi qofaa mitii qabsaahaa mirga ilmaan namaallee.Dhaloota hedduutti waan dansaa hedduu irraa barata;obsa,jabeenna,waan hojjatanii jabeessuu,itti gaafatamaa fi waan hedduu.
Muhaammad Alii qabsaahaa mirga ilmaan namaa
Akkuma duraanuu jennee Muhaammad qaraa maqaa ufii jijjiiratee Muhaamd Ali baafate. Barii sun bara Amerikaa keessatti gurraacha bifa isaatiin jibban. Namii gurraachii faranjii waliin dorgomee moohuu dhiisii eennummaa ufiituu sodaatu.
Gaafa gannii 12 dorgommii boksii jalqabe.Namii biskileetii isaa hatee jennaan nama sun barbaadee lolaa jedhee achumatti dorgommiitti seene.
Akka Amerikaan keessaati sanyiin nama jibbuun haftu qabsaahe.Hujii qaxaramuuf gaafatee dhowwatanii jennaan badhaasa Olompikiitti kennaniif laga keessatti buuse mormii jalqabe.
Amantiin Musliima tahee miilota isaa ka akka Malcom X faan walti dabalamee mirga ummataati qabsaahuu jalqabe.Bara 1963 keesaa maqaa Kaashiyes Kiley jedhan ufi irraa jijjiiree Muhaammad tahe.
Bara 1967 keessaa gaafa Amerikaan Vetnaamitti duulte inni ammoo duula dide.Amantiin tiyya nama ijjeesi naan hin jettu.Obboleesaa akka kiyyaa, gurraacah akka kiyyaa,hiyyeessa mana dhoqqee hin ijjeesu jedhee dide.Jarii itti duuli naan jedhan kun takkuma maqaa hamaan na hin yaamne, takka dhaanee na hin gaargalchine,takkuma saree natti gadi hin dhiifne jedhee dide.
Innii duula didee jennaan ganna sadi dorgommi dhowwanii badhaasallee irraa guurratan.Mana murtiitti falmatee badhaasallee deebifatee dorgommiilleetti deebihe.
Dorgommii gugurdoo innii itti beekame
Dorgommii innii Joorgi Foorman waliin biyya Zaayer keessatti wal dhaane fa. Dorgommi suniin ”The Rumble in the Jungle.”Shaawwessa baddaa keessaa jedhaniin.
Akkuna qarallee jennee bara 1954 keeessa biskileetii isaa hatanii jennaan nama sun dhaanee biskileetti ufii fudhuuf jedhee achumaan dorgommii jalqabe.
Bara 1960 keessaa Olompikii Roomitti warqii badhaafame.Bara 1961 keessaa nama boksii beekamaa Gorgeous George waliin dorgome.Bara 1964 keessa ammoo dorgommii boksii beekamtu moohee “I shook up the world” – Addunyaa Chochoose jedhee ufi faarse.Bara 1964 keessaa maqaa jijjiiratee Muhaammad Alii tahe.
Muhaammad gaafa diqqaa dhiisii gaafuma dhibameesireetti deebhellee hinuma qabsaaha.
Akka Donald Trump, namii amma pirezdanati tahuuf paarti Ripaabilikaan fulaa bu’ee dorgmu kun yoo filatame Mulsiimaa Amerika dhufuu dhowa jechuun isaa faaydaa ufii argachuuf jedhee falme.
Mammaassaa fi dubbii Muhaammad keessaa haga tokko
Ani nama akka billcaahaa loo’u akka kinniisaa hiddu
Ani ka’ima fuula qajeelaati
Guyyaa hin lakkahinii bu’aa guyyaa keessa jiraatu lakkahi
Gaara guddaa si duraa caalaa cirracha kophee keessa si jirutti si buffisiisee ykn butucha
Yoo Muhaammad moohaadhaa jettee oobjatte, ganama kahii dhiifma ufi gaafadhu
Hariyaa Muhaammad Alii:Biiraatti wal yaamaa malee Alii waraanaatti hin yaaminaa jedhe…gaafa hajaja mootummaan Amerikaa Vetnaamitti nama duulchisee Muhaammad duuluu dide
Ani nama hamaa qorsaayyuu fayyaa dhowwu
Nama bifuma isaatiin jibbuun wallaala
Ani jabaa jabaa caalu qofaa mitii harka dhibbaan jabaa caala
Addunyaa waliin dhahee beeke.Eee jajjabduun dhufte fa jedhee ufi faarsa
Maatii fi hariyaan Muhammad eennu jedhaniin?
Haatii isaa, Odessa Grady Clay akkana jedhee ilma ufii faarsite:Waaqii nama ajaaahibaa uume nama sun ammoo garaa kiyya keessatti uume.Gaafa diqqaa takkuma adabatee hin teenne akkuma bubbee sadaasaa waan argern dabra
Obboleetiin Alii diqqoon Rahman Alii:Alii gaafa diqqaa dhakaan na hadhii naan jedha, hin maraatee jedhaan dhakaan ani hadhuun tokkolleen isa hin dhahu jalaa miliqaa
Qabsaahaa mirga ilmaan namaa Amerikaa Malcom X: Afrikaa,Eezhiyaa fi Araba keessallee namii akkanumatti si jaalataa haga lubbuun jirtu itti gaafatama ke beekuu malte jedhee Muhaammad faarse
Akimiin Muhaammad Alii Frediyee Pacheekoo: ammoo Muhaammad gaafa diqqaa muka koree dammee irraa ciree eeyee taate kunoo jedhee irra bu’aa.
Jiyoorji Foreman, namichii Muhaammad boksii wali dhaane:Nama akka Muhaammad ani argeetuu hin beeku.
Pirezidantii Obaamaa fi haatii warra isaa Misheel Obaamaa:Muhaammad Alii nama addunyaa raase jedhanii dabalan.Jaba akkana beekuu keennaafuu galata waaqaati.
Muhaammad yoo dirree dorgommii seenu afaan hamoo dubbachaa nama arrabasaa dorgoma.
Dorgommii guddoon innii irratti beekame ta Miyaamii Filooridaa keessatti nama Sonny Liston jedhaniin wal dorgome.Liston sun marsaa jaheessoo irratti dhahee lafaan dhahe lafatti daawwate.Dhahee buusee jennaan‘ani jabaa jabaa caalu ka na caalu hin jiru, jedhe.
Muhaammad bara 1996 keessaa guca dorgommii Olompikii Atlaantaa Jerogiyaa irratti isatti guhca dorgomsi jalqasiiftu qabsiise.
Muhaammad Alii abbaaa ijoollee sagaliiti.Leyilaa Ali, Hana Ali, Asaad Amin, Khaliah Ali, Muhammad Ali angafa Rasheda Ali, Jamillah Ali, Miya Ali, Maryum Ali fa.Leylaa Alii eegee dhiifte male nama dorgommii booksiitiin beekamtu.
Leylaa Alii ufiifuu nama boksiin addunyaa irratti beekamu.Marroo 24 dorgomtee 24-0 moote.Takkuma hin moohamne.Amma dorgommii dhiiftee sagantaa TV ka NBC keessaa qophii ispoortii keessa hojjatti.
Muhaammad Alii Jimaata itti yaanu kana,Waxabajjii 10,2016 lafa dhaloota isaa Kentaakii magaalaa Luyivilitti awwaanii nama kuma hedduutti dhaqaaf karaa jira.Biyyeen sabladhinnaaf jenne!
Xiinxalaa: Otuu Uummatni Oromoo Gaaffii Mirga Isaaf Ajjeesamaa Jiruu IHAADEG Ayyaana 25ffaa Kabajuun Qaanii Dha
Amerikaatti Ijoolleen Dubraa Ijoollumaan Ijoollee Dhaluu Diqqeeffachaa Dhufuutti Jiran
Ergaa Maammiloota VOA Afaan Oromoo, Sagaleedhan
Dr. Tedroos Adhanoom Marsaa Biraaf Muudaman
Mariin Gaggeeffamu Kallattiin Putiin Waliin Ta’u Qaba:Zeleenskii
Koriyaan Kaabaa Misaa’eela Furguggiftee Jirti